Myanmar Muslim Census 2014
မြိတ်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်းစာရင်း ပညာပေးရှင်းလင်းပွဲ
သန်းခေါင် စာရင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်မြို့ မှရောက်ရှိလာသော ဒေါက်တာမြင့်သိန်း( ငြိမ်းချမ်းလုလင် ) တင်ပြရှင်းလင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့ပြုလုပ်ခဲ့သော 2014 ခုနှစ်လူဦးရေ နှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအခမ်း အနားတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ရောက်ရှိလာသော ဒေါက်တာမြင့်သိန်း( ခ ) မုဖ်သီဦးမြင့်သိန်း ( ငြိမ်းချမ်းလုလင် ) မှ တင်ပြရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
ကန်ခေါင်းရပ်၊ အ.မ.က ( ၈ ) မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို မြိတ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဝင်း၊မြိတ်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးလှစိုး၊ မြို့နယ် ဦးစီးမှူး ဦးနေလင်း ၊ စာရေးဆရာဒေါက်တာ
မြင့်သိန်း ( ခ ) မုဖ်သီ ဦးမြင့်သိန်း ( ငြိမ်းချမ်းလုလင် )တို့ရောက်ပြီးရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့သူ (၄၀၀) ကျော် ရှိခဲ့ပြီး မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှာစကားပြောကြားပြီး ခရိုင်လ၀ကဦးစီးမှူး နှင့် မြို့နယ်လ၀က ဦးစီးမှူးတို့မှ သန်းခေါင်းစာရင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအစီအစဉ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကွန်ယက် ( PCN) မှ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာမွတ်စလင်များရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အတွက် ဒေါက်တာ မြင့်သိန်းမှ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိ တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေထဲမှာ ပသျှူး၊ ပထန်၊အိန္ဒိယ၊ တရုတ် ( ပန်းသေး ) ၊ ဘင်္ဂါလီ ကပြားအနည်းငယ်တို့ပါဝင်နေပြီး ဘိတ်တိုင်းရင်းသား၊ ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရ ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား/နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ မိဘ မျိုးရိုးအမည်များ ကို သန်းခေါင်စားရင်ကောက်ယူသည့်အခါ မျိုးရိုးအမှန်ပြောတတ်ရန်လိုပြီး မျိုးရိုးအမည်တစ်ခုတည်းကိုသာ ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ- အိန္ဒိယနှင့် ဗမာစပ်ထားသည့် ကပြားတစ်ဦးအနေဖြင့် အိန္ဒိယလို့ပြောနိုင်ပေမယ့်.ဗမာလို့ လည်းပြောနိုင်ပါတယ်..ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမွတ်စလင်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ် လူမျိုး- မြန်မာမွတ်စလင် ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ- အစ္စလာမ် ၊ နိုင်ငံသား-မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ဘိတ်သားဆိုပါ ကလည်း လူမျိုး - မြိတ်လူမျိုး ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ-အစ္စလာမ်၊ နိုင်ငံသား- မြန်မာနိုင်ငံသား လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ပသီ ( ခ ) မြန်မာမွတ်စလင် ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်ကတည်းကတည်ရှိလာတဲ့ နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းဝင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ ပသီဘုရင်များရှိသလို ပသီတိုင်းရင်းသား အမှုထမ်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ် မည်သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သည့် လူမျိုးဖြစ်ပါစေ. တိုင်းရင်းသူ/သားများနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားလာသည့် သူများကို ပသီ ( ခ ) မြန်မာမွတ်စလင် လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာရှိတဲ့သူများ အနေဖြင့် ဘိတ်သားစစ်စစ်၊ ထားဝယ်သားစစ်စစ်များ အနေဖြင့် မြိတ်တိုင်းရင်းသား၊ ထားဝယ်တိုင်းရင်းသား လို့ ပြောနိုင်သလို၊ ဘိတ်သား/ထားဝယ်သားများနှင့် တခြားလူမျိုးတစ်မျိုးနှင့် ကပြားဖြစ်တဲ့သူတွေအနေနှင့်လည်း မြိတ်တိုင်းရင်းသား ၊ထားဝယ် တိုင်းရင်းသားလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမွတ်စလင်လို့လည်းပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ မြိတ်ဘက်မှာဆိုရင် ပသျှူး ၊ ပသျှူးကပြား၊ တရုတ်ကပြား၊ ပထန်ကပြား၊ အိန္ဒိယကပြား၊ အာရပ်ကပြား၊ ဘင်္ဂါလီကပြားများရှိပါတယ် ..
အဲဒါအားလုံးဟာ မြန်မာမွတ်စလင်ဆိုတဲ့ လူမျိုးကြီးအောက်မှာခံယူပြီးမြန်မာ မွတ်စလင်လို့ပြောဆိုနိုင် ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ဘင်္ဂါလီ- အိန္ဒိယ၊ပထန်၊ တရုတ် လို့ လူမျိုးတစ်လုံးတည်းဖြေလိုက်ရင် နိုင်ငံခြားသားဆိုတဲ့ စာရင်းထဲပါသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့မိသားစုထဲမှာ တိုင်ပင်ကြပြီး မြန်မာမွတ်စလင် ( သို့  ) တိုင်းရင်းသားတစ်ခုခုနှင့် ကပြားဖြစ် ထားပါက အဲဒီတိုင်းရင်းသား လူမျိုးအမည်ကို ပြောဆိုထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။သန်းခေါင်စာရင်းကောက်သူမှ မိမိတို့ပြောဆိုသည့်အပေါ် စောဒ ကတက်မည်မဟုတ်ဘဲပြောသည့် အတိုင်း ရေးမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် တစ်ကွက်လျှင် ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးသာ လာရောက်ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပြီး အထောက်အကူပြုတစ်ဦးသာ ပါလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ လ၀က မှ လိုက်ပါလာမည် မဟုတ်ပဲ မိမိ တို့ပြောဆိုသည့် လူမျိုး အမည်ကို မ်ိမိတို့ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မိမိတို့မျိုးရိုးအမည်ကို လိမ်လည်ပြောဆိုစရာ မလိုသလို..ကြောက်ရွံ့ ပြီးလည်း အမှန်ကို အမှားဖြစ်အောင်ပြောဆိုစရာ မလိုပါ..မိမိဘာလူမျိုးဖြစ် သည်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုရပါမည်။ သို့ရာတွင် အမှန်ဖြစ်ရန်လိုပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မြန်မာမွတ်စလင်များ၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုက်လံရှင်းလင်းတင်ပြနေသူ ဒေါက်တာမြင့်သိန်းမှာ မြိတ်မြို့တွင် တင်ပြရှင်း လင်းပြီးနောက်..ကော့သောင်းမြို့ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ရနှောင်းမြို့ နှင့် ထားဝယ်မြို့ တို့သို့ဆက်တိုက်သွားရောက်ကာ ရှင်းလင်းတင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ -ထုံးဖိုဗလီလူငယ်များအဖွဲ့ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်း FB စာမျက်နှာ Link http://goo.gl/0tFb7l
Labels: ပသီ, မြန်မာမွတ်စလင်, သတင်း
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် မြန်မာမွတ်စလင် လူမျိုးစုများ
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် လေ့လာသူတဦးရဲ့ မြန်မာနိင်ငံအတွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားချက်ဖြစ်ပါသည်။
Image via Myanmar Muslim Media
Labels: မြန်မာမွတ်စလင်, ဆောင်းပါး
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ဇိုဟူသောအမည်ဖြင့် ထည့်နိုင်ရေး စည်းရုံးရေးလုပ်မည်
ရွှေရည်ဝင်းထက်|ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ဇိုဟူသောမျိုးနွယ်စုအမည်ဖြင့် စာရင်းမှန်ရရှိနိုင်ရန် ဖေဖော်ဝါရီ ဒုတိယပတ်အတွင်းတွင် ဇိုမျိုးနွယ်စုများ အများဆုံးရှိသော မြို့နယ်မျုားသို့ သွားရောက်ကာ စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဇိုမျိုးနွယ်စုကိုယ်စားပြု ဦးကမ်းခင်းဒါးလ်က ပြောသည်။
ဇိုမျိုးနွယ်စုများအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံး ကလေးမြို့သို့ သွားရောက်ပြီး လူထုနှင့်တွေ့ဆုံ၍ စည်းရုံးမှုများ ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ဇိုလူမျိုးစု၏ ကုတ်နံပါတ်အမှန်ကို ပြောပြကာ တစ်မြို့ နယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းတွင် ဖြည့်မည့်ပုံစံကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ လူဦးရေတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မမှားစေချင်ဘူး။ မှားရင် ကျွန်တော်တို့ပဲ ဆုံးရှုံးနစ်နာ မှာ။ ဒါကြောင့် စည်းရုံးရေးဆင်းတာပါ”ဟု ဇိုမျိုးနွယ်စုကိုယ်စားပြု ဦးကမ်းခင်းဒါးလ်က ပြောသည်။
လူမျိုးစုစာရင်း ကုတ်နံပါတ် ၄၂၄ ပိုင်ရှင် တီးတိန်လူမျိုးများသည် လူမျိုးစုစာရင်းကုတ်နံပါတ် ၄၂၁ ပိုင်ရှင် ဇိုလူမျိုးအမည်နောက်တွင် မီးကို ပြန်ထည့်ကာ ဇိုမီးလူမျိုး ကုတ်အသစ် ပြန်လည်လျှောက်ထားလိုခြင်း သည် သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်းသာ ဖြစ်သောကြောင့် ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရဖြစ် သော လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်မှုနှင့် ဇိုလူမျိုးတို့ကိုယ်စား ချင်းလူထုက လုံးဝကန့်ကွက်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားသည်။
“ဇိုလူမျိုးဆိုတာ အရင်ကတည်းကရှိတယ်။ ZCD ပါတီက ဇိုလူမျိုးကို ဇိုမီးလူမျိုးလို့ သတ်မှတ်ကြေညာတဲ့ အတွက် ကန့်ကွက်တာပါ။ ဇိုလူမျိုးကို ဖျက်ပစ်မယ့်သဘောလို့ ခံစားရတယ်။ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဇိုကို ဇိုမီး လို့ သုံးစွဲတော့မယ်ဆိုရင် လက်မခံနိုင်ဘူး”ဟု ဦးကမ်းခင်းဒါးလ်က ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ လူမျိုးနွယ်စုများ အားလုံးကို ချင်းလူမျိုးဟုခေါ်တွင်ရန် စည်းစည်းလုံးလုံး သဘောတူညီ ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကာ လူမျိုးစုစာရင်း ကုတ်နံပါတ် ၄၂၄ ပိုင်ရှင် တီးတိန်လူမျိုးများသည် ချင်းလူမျိုးဟု မခေါ်တွင်လိုဘဲ ခွဲထွက်လိုခြင်းသည် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတို့၏ ညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ချင်းလူထုကလုံးဝကန့်ကွက်သည်ဟု ဇိုတစ်မျိုးသားလုံးကိုယ်စားပြု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
ဇိုမျိုးနွယ်စုများသည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နှင့် တွန်းဇံမြို့တို့မှ စစ် ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ ကလေးမြို့နယ်နှင့် တမူးမြို့နယ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို သန်းခေါင် စာရင်းမှ စာရင်းဖျောက်ခြင်း (STATISTICAL GENOCIDE)
မြန်မာ့ဒီမိုခေါင်းဆောင် ဆိုသူတွေနဲ့ အစိုးရလုပ်သူတွေဟာ အိပ်ပျော်နေရင်း လမ်းလျှောက်နေကြသူတွေလား။ အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လမ်းလျှောက်ပြနေ သူတွေလား။
အခြားနေရာတွေမှာသာ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အစိုးရတို့ သဘောထား မတူတာ ရှိချင် ရှိနေမယ်။ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အများစုကြီးက အိပ်လျှက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လို့ဖြစ်ဖြစ် လမ်းလျှောက်ပြနေကြတာကတော့ တူကြတယ်။ Truth is Bitter. အမှန်တရားဆိုတာ ခါးသီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ချိန်က မြန်မာမွတ်စလင်(ပသီ)၊ ရိုဟင်ဂျာစတဲ့ တိုင်းရင်းသား အမည်စာရင်းဝင်သူတွေ အကုန်လုံးကို ၁၉၈၂နိုင်ငံသား ဥပဒေအရဆိုပြီး အရှင်လတ်လတ် ဘင်္ဂါလီနဲ့ စပ်ပစ်လိုက်တာ တချို့ဆိုရင် လူမျိုးရှစ်မျိုးလောက်စပ်ပြီး (ဥပမာ – ဘင်္ဂါလီ+ရှမ်း+မွန်+ကရင်+မြန်မာ+ပလောင်+ချင်း+ကချင် လူမျိုးလို့) မှတ်ပုံတင်မှာ တရားဝင် စာရင်းပေါက်နေကြပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောချင်ရင် ရေသောက်ပြီး၊ နားပြီးမှ ပြောလို့ ရတော့မဲ့ကိန်းဘဲ။ တပ်မတော်က မဟာဦးနှောက်နဲ့ တီထွင် ထားသော ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မကြားဖူးတဲ့ အံ့ဘွယ် လူမျိုးအမည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေပါ။ စိတ်ကူးယဉ် မဟုတ်ဘူး။ ဒီလူတွေကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဘယ်လို အမည်စာရင်းသွင်းကြမလဲ။
ဒီမွတ်စလင်တွေထဲကဘဲ တဖအေ၊ တမအေထဲက မွေးချင်းချင်း အတူတူ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်းကိုးကွယ်သွားရင် ဦးခင်ရီတို့က မြန်မာလူမျိုးလုပ်ပြီး ဆွဲစားလိုက်တယ်။ မွတ်စလင်ဖြစ်နေဆဲဆိုရင် ဘင်္ဂါလီနဲ့ စပ်ပြီး ကပြားလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဖအေ၊ မအေ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ ကမွေးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အစ္စလာမ်ကို ပြောင်းလဲကိုးကွယ်သူ ဖြစ်ရင်လည်း မူလမြန်မာလူမျိုး အဖြစ်ကနေပြီး ဘင်္ဂါလီကပြားလို့မှတ်ပုံတင်မှာ နောင်ကျဉ်သွားအောင် ကန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြန်ရော။ ဘာသာပြောင်းရင် လူမျိုးပြောင်းတယ်တဲ့ဗျာ။ အံ့ရော။ ၁၉၈၂ခုနှစ်ကတည်းက ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ အသက်သွင်းရေးကို ဗြောင်အသုံးချနေသော ကမ္ဘာပေါ်က တစ်ခုတည်းသော လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်နိုင်ငံ (Racist State)ပါ။ အတော်လေးကို အရှက်နဲကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ထောင်ကျော်က ဝင်ရောက်လာတာ လူမျိုးတစ်ဒါဇင်တောင် မရှိပါဘူး။ လူမျိုးချင်းစပ်ပြီး ကပြားတွေ ပေါက်ဖွားလာလိုက်တာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၄၄)ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီထဲက ကပြားချင်းအတူတူ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် မြန်မာမွတ်စလင်(ပသီ)၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ မြေဒူး၊ ပသျှူး၊ ပန်းသေးစသူတွေကို တမင်ရွေးပြီး စစ်အစိုးရက မိမိသဘောနဲ့ တိုင်းရင်းသားစာရင်းက ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဟာ အရှင်လတ် လတ် နေ ရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ ခိုးဝင်လာသူ၊ နိုင်ငံမဲ့သူ၊ ဧည့်သည်တွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေသဖွယ် အနှိမ်ခံနေကြရတာ ကြာပါပြီ။
တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီးသူတွေကို တိုင်းရင်းသားစာရင်းက ပယ်ဖျက်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လိုအစိုးရမျိုးမှာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ မရှိဘူး။ အဲဒီ စစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်တွေ မမွေးခင် ပဝေသဏီကတည်းက တိုင်းရင်းသားဖြစ်နေသူတွေကို မနေ့တနေ့ကမှ မွေးလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေက မွတ်စလင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တော့ ဘူး လုပ်လာတာကို ကျနော်တို့ လုံးဝ လက်မခံပါဘူး။
၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးနောက် အစုိုးရအဆက်ဆက်က ချမှတ်ထားတဲ့ မူများအရ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကို အစိုးရဌာနတွေမှာ အလုပ်မခန့် ချင်ကြဘူး။ အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားရေးမှာ ပိတ်ဆို့ခံနေရတယ်။ တရားခွင်တွေ၊ အစိုးရရုံးတွေ၊ ရဲဌာနတွေမှာ ပိုမိုခွဲခြား ဖိနှိပ်ခံနေကြရ တယ်။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရရှိရေးလည်း ခက်ခဲလာတယ်။ ခရီးသွားရာမှာ အစော်ကားခံရဆုံး လူတန်းစားဖြစ်လာတယ်။ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှုတွေ ပိတ်ပင်ထားတော့ ထမင်းစားဖို့၊ အသက်ရှင်ဖို့ လုပ်စရာက ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ ဈေးဆိုင်ဖွင့်တာဘဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီကျဉ်းကျဉ်းလေးရှိတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလည်း ဒီမိုကရေစီ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်ရောက်ကာမှ သမိုင်းမှာ မကြုံဖူးအောင် အပြင်းထန်ဆုံး စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာကို ခံလိုက်ရတော့တာပါဘဲ။
လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ လူဦးရေ သန်း(၆၀) ရှိပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်က ရိုဟင်ဂျာအပါအဝင် အနည်းဆုံး ၅%ကနေ ၁၂%အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ အမျိုးမျိုး ခန့်မှန်းကြ တယ်။ အနည်းဆုံး ခန့်မှန်းချက် ၅%ဖြစ်ရင်တောင် လူဦးရေသုံးသန်းဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးပြီးရင် ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံး လူအုပ်စုကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူအုပ်စုကြီးက နိုင်ငံသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ စွမ်းအားစုတွေဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ဒုတိယလူဦးရေ အများ ဆုံးဖြစ်တဲ့ လူအုပ်စုကြီးကို ခွဲခြားဖိနှိပ်ပြီး တရားမျှတ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ထောင်လို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို လည်း မြင်နိုင် တဲ့စွမ်း အား ရှိကြဟန်တောင် မတူပါဘူး။ အတော်လေးကို အမျှော်အမြင် ကြီးကြပေပါတယ်။
မွန်၊ ကရင်၊ ကချင်စစ်စစ်တွေတင်မက တိုင်းရင်းသားကပြားတွေကိုပါ မြန်မာလူမျိုးစာရင်းထဲမှာ မလိမ့်တပတ်နဲ့ သွင်းထားလို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားတွေ အလုံအလောက် ရှိလျှက်နဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး မရတဲ့ ပြသနာတွေကြောင့် ဝေဖန်ကန့်ကွက်နေကြတာတွေကို အားလုံး ကြားသိနေကြပါ တယ်။ မြန်မာ မွတ်စ လင် အများ အပြားကို ၁၉၇၂ သန်းခေါင်စာရင်းထဲမှာ မြန်မာလူမျိုးအဖြစ် တမင်ရေးသွင်းခဲ့တာကိုလည်း ကျနော်တို့ မမေ့သေးပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့် မွတ်စလင် အပါ အဝင် တိုင်းရင်းသားဦးရေက အလွန်နည်းပြီး မြန်မာက အလွန်များနေတာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက အလွန်များနေပြီး အခြားဘာသာဝင်တွေက အလွန်နည်းနေ ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
နှစ်ခါအလိမ်ခံရရင် အလိမ်ခံရသူရဲ့အပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုတိယအကြိမ် အလိမ်မခံရအောင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက ၂၀၁၄သန်းခေါင် စာရင်းကို အစိုးရက မကောက်ခင် မိမိတိုင်းရင်းသား ဦးရေစာရင်းကို ကြိုပြီးကောက်နေကြပါပြီ။ ဒါက ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းကို တိုင်းရင်းသားတွေက လုံးဝ အယုံအကြည် မရှိပါဘူးဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးခင်ရီက တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးမှာ မပါရင် မည်သည့်လူမျိုးအဖြစ် ရေးသွင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားလူမျိုးစာရင်းမှာ ထဲ့လိုက် မယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်တစ်ထောင်ကျော် မြန်မာနိုင်ငံစတင် တည်ထောင်ကတည်းက သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ၊ မျက်ရည်တွေကို တန်းတူပေး ဆပ်ခဲ့တဲ့၊ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲမှန်သမျှမှာ တန်းတူရည်တူ အသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွကို အမည်သညာမဲ့၊ မှတ်တိုင်မဲ့ အခြားလူမျိုးအဖြစ် စာရင်းဖျောက်မယ်ဆိုတာက အင်မတန် တာဝန်မဲ့သော၊ အင်မတန် သစ္စာမဲ့သော၊ အင်မတန် ကျေးဇူးကန်းသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ဝင်ကြတုန်းကတော့ မွတ်စလင်တွေလည်း ပါဝင်ကြပြီး အားလုံး အတူတူလို့ ပြောခဲ့တယ်။ အခုလွတ်လပ်ရေး ရမယ်တောင် မကြံသေး ဘူး၊ ခွဲခြားခွဲခြား လုပ်ချင်လာကြတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဘယ်နှစ်ယောက် သတိရကြပါ သလဲ။
တစ်ကယ်တော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ တဆက်တည်း အေးအတူ ပူအမျှ၊ သေဖေါ်သေဖက်၊ တိုက်ဖေါ်တိုက်ဖက်၊ တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖေါ် ထူထောင်ဖက်ဖြစ်သည့်အပြင် သွေးချင်းလည်း စပ်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို အမည်မဲ့ လူမျိုးအဖြစ် စာရင်းဖျောက်မယ် (STATISTICAL GENOCIDE) ဆိုလိုက် တာကတော့ ရက်စက်လွန်း၊ ပက်စက်လွန်းပါတယ်ဗျာ။
ထုံးဖိုဗလီစန္ဒာခန်းမတွင် သန်းခေါင်စာရင်း ဟောပြောမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့
ထုံးဖိုဗလီစန္ဒာခန်းမတွင် 26.1.2014 ရက်နေ့ သန်းခေါင်စာရင်းစာဟောပြောမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ မြိတ်သူ/သားတွေ အနေနှင့်သိသင့်သိထိုက်သည်များကို ကြိုတင်သိရှိထားရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့ မှ ပညာရှင် မုဖ်သီ ဒေါက်တာ မြင့်သိန်း (စာရေးဆရာ- ငြိမ်းချမ်းလုလင် ) လာရောက် ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း အနေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့ မှာလာရောက် ဟောပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ယခုရှေးပြေးအနေဖြင့် ဘိတ်မြို့ပေါ်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များ ၊ ပရဟိတအဖွဲ့များနှင့် အီမာန်ရှေ့ဆောင်ဆရာကြီးများ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစည်းအဝေးကို အသင်းအဖွဲ့အသီးသီးနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူ ၁၀၀ ခန့်တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါ မိမိ တို့ မျိုးရိုးအမည်မှန်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်ပြနိုင်ဖို့ .သန်းခေါင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပို့ချခြင်း ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်း ၊ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ရန် အတွက်လိုအပ်တဲ့ ရန်ပုံငွေများကို ကြိုတင်ရှာဖွေထားဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ- ထုံးဖိုဗလီလူငယ်များအဖွဲ့ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်း FB
Labels: မြန်မာမွတ်စလင်, သတင်း
ပသီ လူမျိုးတို့အား ရှေးမူလ ဘူတ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု တစ်စုဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်းကြေညာပေးရန် UNC ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက် (UNC) ၏ ဗဟိုဦးစီး ညီလာခံကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက်နေ့များတွင် မင်္ဂလာဒုံ ဗုခါရီရှားခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ညီလာခံပိတ်သိမ်းပွဲကို တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညီလာခံမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော အဆို(၈)ချက်ကိုတင်သွင်း၍ မင်္ဂလာဒုံ ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဗဟိုဦးစီး ညီလာခံကြိးတွင် တက်ရောက်ခဲ့ကြသူ ဦးစီးကိုယ်စားလှယ်များက အဆိုပါများကို တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
(၁) ပသီလူမျိုးတို့သည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရှေးမူလ ဘူတ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်စုဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေညာပေးရန်၊
(၂) ပသီလူမျိုးအဖြစ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရန်နှင့် ၂၀၁၄-ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူ ရာတွင် ကြိုတင် Pre Code ဖြင့် ဖော်ပြပေးရန်၊
(၃) လူနည်းစု အခွင့်အရေးကာကွယ်သည့် ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲ၍ အမြန်ဆုံးတင်သွင်းရန်၊
(၄) ၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် တင်သွင်းထားသည့် ကိစ္စကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၅) လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုင်ရှင်မဲ့ လယ်ယာစနစ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ ပိုင်ရှင်အမည်ပေါက် လယ်ယာစနစ်သို့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၆) နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အပြည့်အ၀ ထိရောက်စွာ ရှိစေရေး တိုက်တွန်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၇) နှစ်ပေါင်း (၆၀)ကျော်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် လက်ရှိ မငြိမ်မသက်မှုများ အားလုံး ချုပ်ငြိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရန်၊
(၈) ၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်း၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်နိုင်ရန်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အခွင့်အရေးများ လွတ်လပ်စွာရရှိမှု အာမခံနိုင်ရန်၊ ပြည်ထောင်စုသားများ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့ဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန်နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် သမိုင်း အမွေကောင်း တစ်ခုအနေနှင့် ပသီလူမျိုးအမည်ကိုသာ အမျိုးသားအမည်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရေး ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် တို့ကို ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။
အဆိုပါ အဆို(၈)ရပ်ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက် (UNC)၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရပါတယ်။
၎င်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သူ ၉၅၀-၀န်းကျင်ရှိပြီး ‘ပသီအမျိုးသားအရေး – တို့အရေး၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် – တည်ဆောက်ကြ’ ‘အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက် အဓွန့်ရှည်ပါစေ’ဟူသော ကြွေးကြော်သံများဖြင့် အခမ်းအနားကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ ပသီလူမျိုးတွေကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတစ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ ကုတ်နံပါတ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ UNC အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက် ပါတီက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်မှာ ကျနော်တို့ ညီလာခံလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီညီလာခံမှာ အဆိုတွေ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသားစာရင်းမှာ ပသီလူမျိုးများကို တိုင်းရင်းသားစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့ သန်းခေါင်စာရင်း ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာ pre code ထည့်ပေးဖို့ အဲဒီအဆိုလည်းပါခဲ့ပါတယ်၊ တခြားအဆိုတွေလည်းပါတယ်၊ အဲဒါဘာတွေလည်းဆိုတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ထာဝရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဒါတွေလည်းပါပါတယ်၊ အဲဒါကို ဒီနေ့ကတော့ အများပြည်သူသိအောင် ကြေညာဖို့အတွက် ဒီပွဲကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
UNC ပါတီက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ထွန်းကားရေးနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၊ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ပသီလူမျိုးဆိုတာ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါး လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်က မြန်မာ - မွတ်စလင်လို့ သတ်မှတ်ခံရတာကနေ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး မရောယှက်ရဘူးဆိုပြီး အဲဒီအမည်ပါပျက်သွားကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာ ဗမာဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ချိုက ပြောပါတယ်။
Labels: ပသီ, သတင်း
သန်းကောင်စာရင်းကောက်ယူရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ (မန္တလေး) ဖွဲ့စည်း
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ပြည်လုံးကျွတ် သန်းကောင်စာရင်းကောက်ယူရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ.ကြီး) မန္တလေးမြို.ကို၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက်နေ.က ဖွဲ.စည်းခဲ.ပါသည်။
လာမယ့် မတ်လ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါ ဇိုမီး ဆိုတဲ့ အမည်တစ်ခုကိုသာ တစုတစည်းတည်း အသုံးပြုကြဖို့ ဇိုမီးမျိူးနွယ်စုတွေ အများစုနေထိုင်ကြ တဲ့ဒေသတွေမှာ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ZCD က စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမယ့်အစီစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇိုမီးမျိူးနွယ်စုတွေ အများစုနေထိုင်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးမြို့ ဂါလီလဲ ဘုရားကျောင်းမှာ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် မနေ့က ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပူးဂင်ကမ်းလျန်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက ချင်းလူမျိူး ၅၃ မျိူးထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ခေါနို၊ ဂွီသယ်၊ စီးရင်း၊ ဆိုင်းဇမ်၊ ဇို၊ ဟိုင်ဒင်း၊ တေဇမ်း၊ သာဒို၊ ဒင် နဲ့ ဟွမ်ဂို စတဲ့ မျိူးနွယ်စု ၁ဝ မျိုးတို့ဟာ ဇိုမီးလူမျိူုးတွေဖြစ်ကြပြီး ဒီမျိူးနွယ်စုတွေအနေနဲ့ လာမယ့် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါမှာ ဇိုမီးဆိုတဲ့ အမည်နာမတစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုသွားဖို့ ခုလိုလိုက်လံရှင်းပြနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပူးဂင်ကမ်းလျန်က ဆက်ပြောပါတယ်။
ဇိုမီးမျိုးနွယ်စုတွေ အများစုနေထိုင်ကြတဲ့ ချင်းပြည်နယ် အထက်ပိုင်း တီးတိန်၊ တွန်းဇံနဲ့ ကျီခါးမြို့နယ် တွေမှာလည်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး နယ်တွေအထိ ကွင်းဆင်းလေ့လာမယ့် လူငယ်အဖွဲ့တွေကို သင်တန်းပေးနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
မနေ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒေသတွင်းအခြေစိုက် ဘုရားကျောင်း ၈၃ ကျောင်းမှ ပါစတာ၊ အသင်းလူကြီးနဲ့ အသင်းသူအသင်းသား စုစုပေါင်း ၆၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဇိုမီးကို အသုံးပြုဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ ပူးဂင်ကမ်းလျန်က ပြောပါတယ်။
ဇိုမီးလူမျိုးတွေဟာ တီးတိန်၊ တွန်းဇံ၊ ကျီခါး၊ တမူး၊ ကလေး၊ မန္တလေးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့နယ်တွေမှာ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေ ၃ သိန်းကျော်ခန့်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ဖြင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ( ရွာဟောင်းဗလီ ) တွင်ပြုလုပ်
၂၀၁၄ သန်းခေါင် စာရင်းနှင့်မြန်မာ မွတ်စလင်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေါက်တာမြင့်သိန်း( ငြိမ်းချမ်းလုလင် )- ဦးထွန်းကြည် ( PCN ) - Hj တင်မိုး ( PCN ) တို့ ၂၄-၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့ တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ( ရွာဟောင်းဗလီ ) ဟောပြောခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သတင်းနှင့် ဓါတ်ပုံ- Peace John FB မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
မြိတ်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်းစာရင်း ပညာ...
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် မြန်မာမွတ်စလင် လူမျိုးစု...
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ဇိုဟူသောအမည်ဖြင့် ထည်...